Zimbabwe · March, 2011 · Global Voices
Zimbabwe · March, 2011
Stories about Zimbabwe from March, 2011
Zimbabwe: Exhuming bodies for votes?
Elections 30 March 2011
Using the dead to win votes: “The beleaguered ZANU (PF) political party is at it again, now by trying to buy political mileage out of the discovery of bodies in the Mashonaland region, yet they continue to neglect the massacres carried out in Matabeleland in the 1980’s.”
Africa: Democracy in Africa
Middle East & North Africa 22 March 2011
Computer language explanation of the democratic developments in Africa: “IVORY COAST: 60% [Alert: Virus-Gbagbo detected_Trojan Horse-Ouattarra in Quarantine], CONGO: Connection lost since 1997, NIGERIA: Starting Connection, ZIMBABWE: 404 Error – Server not found…”
Zimbabwe: Zimbabwean arrested over Facebook comment
Freedom of Speech 8 March 2011
Zimbabwe's first Facebook arrest: “39 Year Old Zimbabwean Vivas Mavhudzi has been arrested following a comment he posted on a Facebook page allegedly belonging to Zimbabwe Prime Minister Morgan Tsvangirai.
Zimbabwe: Share your solidarity with the 45
Freedom of Speech 7 March 2011
Share your solidarity with Munyaradzi Gwisai of the International Socialist Organisation (Zimbabwe) and the 44 others in Zimbabwe who have been charged with treason for discussing recent events in Tunisia and Egypt.
Zimbabwe: Solidarity messages for Gwisai and 44 others
Freedom of Speech 3 March 2011
Read solidarity messages for Munyaradzi Gwisai of the International Socialist Organisation (Zimbabwe) and the 44 others who have been charged with treason after organising a meeting to discuss uprising in Egypt.
Africa: Sub-Saharan Africa censors Mideast protests
Djibouti 3 March 2011
Some African leaders do not want citizens to know what is happening in North Africa and Middle East: “As news of Middle Eastern and North African protests swirl around the globe, satellite television and the Internet prove vital sources of information for Africans as governments fearful of an informed citizenry...